ထိုကဲ့သို့သောသည်အတိုင်း၊ဂိမ်းမှစတင်သည်၊အစောပိုင်းအသက်အရွယ်:ထည့္ပါ၊ဝက်ဝံရုပ်၊မီးဖိုချောင်၊မာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ပြီးတော့လိင်အင်္ဂါ၊နောက်တဖန်အထို့နောက်အသီးရုပ်များ၊အဝတ်စုတ်ရခ်၊မိတ်ကပ်၊နှင့်အခြားလူရဲ့လိင်အင်္ဂါ။ အခုအချိန်မှာတစ်ဦးချင်း၊မခွဲခြားဘဲကျားမ၏၊သတိပြုမိဖြစ်လာ၏သူ၏လိင်၊အဆိုပါဂိမ်းထဲမှာမှအစပြုတက်အပူ၊လူမှုတန်ဖိုးများ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်၊သိချင်စိတ်၊စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးလာပစၥည္းမ်ားအတွက်အပြေးပြိုင်ပွဲများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးသို့ရတဲ့အထဲကအခြေအနေကိုနမ်းသင့်အချစ်နဲ့မှအမှတ်တံဆိပ်မှာမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်။, လူအများစုကြိုက်သူများနှင့်အတူနမ်း၊အထူးသဖြင့်သူတို့စတင်ခဲ့သည့်အခါသောက်ကြောင့်ခဲ့ကြောင်းအစဉ်အမြဲဆင်ခြေဆင်ရန်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်နမ်းအကြင်သူတို့သည်တွင်းတစ်ညနေပြီးဒါဟာလူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်။ အများဆုံးအသင်းမှပွင့်လင်းခဲ့ကြ၊ဒါပေမယ့်ရှိအမြဲတမ်းအဲဒီလူ(အများအားဖြင့်အသက်ကြီးသူများ)နှင့်အတူတက်လာပုံပြင်များအကြောင်းအိမ်သည်(အရာအားဖြင့်အချို့သောအံ့ဖွယ်အဘယ်သူမျှမရှိခဲ့ဖူးပြီရန်)အဘယ်မှာသူတို့အားအမှုအရာဖြစ်ပျက်သောသာမြင်ရပေါ်ညမ်းသို့မဟုတ်လိင်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်။
သင်အနည်းငယ်စိတ်ဆိုးသည်၊ဒါပေမယ့်သင်ဖြစ်ချင်တယ်။ သင်ရုံသံုးေချင်၊ဒါပေမယ့်သင်ဘယ်တော့မှမနိုင်စေတဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏သူတို့အားပိုပြီးအစွန်းရောက်။ သင်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးပင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစား၊ဒါပေမယ့်သင်ဖို့ပိုဆန္ဒရှိကြောင့်စောင့်ရှောက်၏အဆင့်မှာစိတ်ကူးယဉ်။ ယနေ့အချိန်တွင်၊အများကြီးနှစ်ကတည်းကသင်ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေများပိုမိုကောင်းမွန်သူတို့ရဲ့ဂိမ်း၊နှင့်သင်ဟုတ်ကဲ့၊သူတို့မရှိတော့များမှာမြို့ပြဒဏ္ဍာ။ ဤမျှလောက်နှင့်အတူသတင်းအချက်မှာမိမိတို့အလက်ချောင်း၊အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏လိင်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်မှာရပ်တန့်ဆီဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ် monogamous လိင်? သို့သော်၊သူတို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူးပြဿနာတွေမပါဘဲ။, ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်အဓိကအား၏ပတ်ဝန်းကျင်။ သူတို့နေဆဲတက်ထားမှအကျိုးကျေးဇူးအစဉ်၊မိန်းကလေးယေဘုယျအားဖြင့်မျှော်လင့်ပြေစေဖို့ဘဲမျှော်လင့်ပျော်ရွှင်ဖို့၊သူတို့မကြာခဏ(ဝမ်းမြောက်ခြင်း)ရန်သဘောတူ။
အ Nutaku ခလုတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်အရွယ်ရောက်သာ။ ဘယ်လိုအသွင်အပြင်နှင့်ပြုမူ။ အဆိုပါတီထွင်သူပြင်ဤခလုတ်အဖြစ်"ပထမခလုတ်အရွယ်ရောက်"၊ဆိုလိုသည်မှာ၊တစ်ဦးနှေးနှေးနှင့်အတူပြတ်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာ-လိင်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်။ အာလာဂါစီအ Nutaku တယ်၊အရာအတွက်အထူးပြုကား/လိုးဂိမ်း၊အရာသည်လည်းအခလုတ်ခုံ။, ပေမယ့်နှေးနှေးဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကတင်ဆက်ခဲ့ကြလျှင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၊ရိုးသားစွာ၊ကျွန်ုပ်တို့သည်သေချာမသိကြသူ(ပျမ်းမျှအားဖြင့်)အလိုရှိသည်ဤအိမျတျော၌အထူးသဖြင့်အခါ၊သင်သည်အဘယ်အရာကိုမြင်နဲ့တူလှပါတယ်၊ကဟန်အချို့ကွန်ကိတ်မုန့်၏အသွင်သဏ္ဌာန်၌အကြီးအမျိုးသမီးရဲ့ရင်သား။ အများဆုံးထူးထူးဆန်းဆန်း၊ကို/ပိတ်ခလုတ်ကိုတွင်အလိမ္အလိုလို(အသေးစားကစားအပေါ်ဗမာစကား-ဖွင့်/ပိတ်-ပေါင်းစပ်နှင့်အတူနို့တစ်ဦးအဖြစ် erogenous ဇုန်)။
တစ်နည်းနည်းဖြင့်၊အင်တာနက်ပေါ်မှာ၊သငျသညျပုံကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအောင်၏ဤထူးဆန်းဆန်းနှေးနှေးသွားလျှင်အားဖြင့်မည်သည့်အခွင့်အမိန့်ကြောင့်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုသိစေဒီတော့ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်။ လမ်းဖြင့်၊ကျွန်တော်ထည့်သောပထမဦးဆုံးစီးရီး(မဆိုနည်းများအပြားကိုအပိုင်းပိုင်း)စေချင်သနည်းဆိုက်ကနေနှင့်သင်၏စျေးနှုန်းအခလုတ်အတော်လေးမြင့်မားထည့်သွင်းစဉ်းစားဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များ"လိင်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်"-၁၇၀ ဒေါ်လာ? အမှန်စင်စစ်ချစ်သောသူ၊မည်မဟုတ်။ အာလာဂါစီကလုံးဝလုပ်လက်ဖြင့်၊ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းအပေါ်ပုံနှိပ်နေကြတယ်ရွေး ၃D ပုံနှိပ်။, အဆိုပါကွန်မႈအတွက်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်း၊နှင့်ရှိပါတယ်စံသွင်းအားစုအပေါ်အမှုအပါအဝင်၊သခ်ာ။
သုတေသနအဆိုအရ၊ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ဆန္ဒအလျောက်စစ်တမ်းကောက်ယူဒေသခံများ၏ကွဲပြားသောအသက်အရွယ်၊ကျား၊မလူတန်းစား၊ယဉ်ကျေးမှုတည်ဆောက်ပုံ၊ထိုသို့ထွက်လှည့်လိုလူကဗီဒီယိုဂိမ်းများကစားရန်တစ်လမ်းအဖြစ်အနားယူနှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေပြီးနောက်အလုပ်မှာသို့မဟုတ်ကောလိပ်။ ဖဆိုသူမ်ားအညာဘက်ကိုရှေးခယျြဖို့ပိုပြီးအရာတို့ကိုအများနှင့်အဆင့်အညီသူတို့ကိုအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဝေးအားဖြင့်အသူတို့ထဲကအများစုဟာ၊၇၄%ဖြေဆိုသူ၊ပြောဆိုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ထွက်ဆွဲထားနှင့်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအရာကြွင်းလေနှင့်အနားယူနေစဉ်၊ဒုတိယနေရာ၌ကစားခဲ့သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊တတိယဖြေဆိုဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အမျိုးအစားများ၏ကြွင်းသောအရာအပေါ်သူတို့ရဲ့စာရင်း။, ငါတို့သည်လည်းသတိပြုကြောင်းလူအများစုဒီနေရာမှာရွေးချယ်လိင်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်အဖြစ်သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအမျိုးအစားဂိမ်းပျော်စရာ။ အတွက်တတိယနေရာအဝဲကောင်းသောအစားအစာ၊သောခဲ့သည်အားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ ၂၉%ဖြေဆို။ ကိုနှိုင်းယှဉ်အတွက်၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ညစ်ညမ်းစာပေများ၊အတွက် ၄ နေရာ၊အချို့သာ ၂၇%ဖြေဆိုထား၏ဤအမျိုးအစားအပန်းဖြေအပေါ်သူတို့ရဲ့စာရင်း။
သုတေသန၏အထွေထွေနိဂုံးကြီးကစားဗီဒီယိုဂိမ်းများပုံစံတခုအဖြစ်အပန်းဖြေ၏ပြန်လည်နာလန်ထူများကြီးပိုမိုလွယ်ကူကနေစိတ်ဖိစီးမှုအလုပ်မှာဆောင်သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေအလုပ်ကနေအိမ်ပြန်အလှန်။။။။။ ကြီးမားသောရှယ်ယာအတွက်အမျိုးအစားဂိမ်းအတွက်မေးခွန်း။ သုတေသနအလေးပေးဖော်ပြကြောင်းကစားသမားတွေအကောင်းဆုံးလွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့်တစ်ခုတည်းကစားသမားဂိမ်း၊အဓိကပထမဦးဆုံးလူတစ်ဦးသေနတ်သမား(ထုတ္ႏ)၊လိင်ဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်၊နှင့်အရေးယူ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အခုနှစ်၊နောက်ဆက်တွဲဂိမ်းနဲ့သူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေစိတ်ဖိစီးမှုအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့်နောက်ထပ်ပိုဆိုးချာေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်။
မည်မျှရှိသည်ကိုဂရပ်ဖစ်ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းကိုပြောင်းလဲအတွက် ၁၀ အနှစ်?
အစဉ်အဆက်ကတည်းကသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်၊ဗီဒီယိုဂိမ်းများသိမ်းပိုက်လိုက်ကြပြီ၊အများအားဖြင့်ငယ်ရွယ်။ ထိုခေတ်၏ယိုဂိမ်းများခဲ့သည်ယုံဂရပ်ဖစ်တိုးတက်မှုနှင့်ပေါ်ပေါက်ထေူ။ ယနေ့ကျွန်တော်တို့မှာသက်သေခံဖို့အခွင့်စစ်မှန်သောဂရပ်ဖစ်။ နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်၊ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ဘဝအစီအစဉ်သို့ရောက်ရှိကြသူတို့၏အထွတ်အထိပ်၊နှင့်ဤနည်းပညာကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေ့နှင့်အတူမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရှိန်မြှ။ ဂရပ်ဖစ်များအဆင့်မြင့်မျှလောက်သောဂိမ်းများဆယ်နှစ်ခွဲနိုင်မနှိုင်းယှဉ်။, ကျနော်တို့ရှိသည်ဥပမာတစ်ခုလိမ့်မည်ဟုရှင်းလင်းစွာပြသသငျသညျအကြှနျုပျတို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်:DreamSexWorld တဲ့ ၃d ညမ်းဂိမ်းအကြောင်းအနည်းငယ်ဂိမ်းများစျေးကွက်အပေါ်တိုင်းနှင့်အများအပြားတူညီတဲ့အယူအဆ။ ဒီဗီဒီယိုဂိမ်းရဲ့ဂရပ်ဖစ်များတစ်ဦးကသံသယမရှိဘဲအကောင်းဆုံးအရာသင်၏မျက်စိမှားယွင်းကြောင်းပေါ်၊ကျနော်တို့ဘာမှမဆိုလိုကနေၡမ်ားဖခင် Croft အစာကနေ OverWatch နေသောအစားထက်သန်မှပေါက်ကွဲကြမ်းတမ်းသောကင်မရာရှေ့မှာ။